China Plastic Slab Formwork orinasa sy mpamatsy |Lianggong
Ny endrika plastika dia mety amin'ny fanatanterahana andry simenitra, andry, rindrina, plinths ary fototra mivantana eo an-toerana.Ny rafitra interlocking sy modular amin'ny formwork plastika azo ampiasaina indray dia ampiasaina hanamboarana rafitra simenitra miovaova be, saingy tsotra.Maivana sy matanjaka be ny tontonana.Izy ireo dia mifanentana indrindra amin'ny tetik'asa mitovitovy amin'izany sy ny trano fonenana faobe mora vidy.Ny modularity dia manome fahafaham-po ny filana fanorenana sy drafitra rehetra: tsanganana sy andry samy hafa endrika sy refy, rindrina sy fototra samy hafa hateviny sy haavony.
Ny endrika plastika dia endrika maivana kokoa raha oharina amin'ny takelaka hazo mahazatra.Ankoatr'izay, ny fitaovana plastika nanaovana azy dia mamela ny simenitra tsy hiraikitra: ny singa rehetra dia azo diovina mora foana amin'ny rano kely.
1. Modular sy zavatra maro eny an-toerana.
2. Tantana vita amin'ny patanty amin'ny nylon ho an'ny fanakatonana tsara ny tontonana.
3. Mora ny fandravana sy fanadiovana haingana amin'ny rano fotsiny.
4. Ny fanoherana avo (60 kn/m2) sy ny faharetan'ny tontonana.
Afaka tapahana malalaka sy azo amboarina miaraka amin'ny herin'ny fantsika lehibe.Customizable mifototra amin'ny hateviny, ny refy ary ny fananana manokana.Customizable amin'ny endrika, toy ny miforitra, curling.
Mora mihetsika satria mihena 50% ny hakitroky raha oharina amin'ny endrika hazo.
Ny surface composite tsy tantera-drano dia misoroka tsara ny olana ateraky nyny tontolo iainana mando, toy ny fitomboan'ny lanja, warping, deformation, harafesiny sy ny sisa.
Ny fihodinana dia hatramin'ny fotoana X raha ampitahaina amin'ny ankamaroan'ny endrika plastika, miaraka amin'ny fanoherana ny hafanana ambony ary ny fananana mekanika feno.
Safe sy sariaka ny tontolo iainana ny dingana plastika kokoa mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena.
Simenitra mahatohitra surface dia mora diovina.Rindrina maina endrika amin`ny malamalama ambonin`ny sy tsara fahatsapana.
fizahan-toetra Unit tahirin-kevitra Malagasy
Fisorohana rano % 0.009 JG/T 418
Ny hamafin'ny morontsiraka H 77 JG/T 418
Hery fiantraikany KJ/㎡ 26-40 JG/T 418
Hery flexural MPa ≥100 JG/T 418
Modulus elastika MPa ≥4950 JG/T 418
Vicat fanalefahana ℃ 168 JG/T 418
Tsy mirehitra afo ≥E JG/T 418
hakitroky kg/㎡ ≈15 ----
teo aloha: Steel Prop
Manaraka: Customized Steel Formwork